Puntland oo laga dalbaday in ay maxkamad hor geyso dad Boosaaso lagu xir xiray - BBC News Somali
Puntland oo laga dalbaday in ay maxkamad hor geyso dad Boosaaso lagu xir xiray
22 Luulyo 2019
Waxaa magaalada Boosaaso ee gobolka Bari, maalintii Afaraad ku xiran afar xubnood oo ka mid ah guddi u xilsaaran dhismaha waddada dhex marta magalaada.
Wararka ayaa sheegaya in maamulka Puntland iyo dadka la xiray ay isku fahmi waayeen hannaanka loo maray $150 kun oo dollar oo la sheegay in ay dowladda federaalka ee Soomaaliya ka heleen. Lacagtaas waxaa loo adeegsan lahaa dhismaha waddada, sida dowladda laga soo xigtay.
Puntland ayaa ku doodaysa in lacagtaas ay ahayd in la soo mariyo Bangiga Dhexe ee maamulkaas, guddigana laga codsaday in ay geeyaan Bangiga, ama ay dib u celiyaan balse ay ku gacan sayreen.
Xubnaha xiran waxaa ka mid ah guddoomiyihii guddigaas, Sheekh Maxamed Macallin oo xalay xabsiga loo taxaabay, sida uu ku warramay weriye Axmed Cawil oo ku sugan Garoowe.
Saddexda xubnood ee kale ee xiran ayaa kala ah: Sheekh Maxamed Faahiye Ciise, Nabadoon Maxamed Ibraahin Xaaji iyo Eng Maxamuud Maxamed Xuseen (Maalfo).
Maamulka gobolka Bari iyo kan degmada Boosaaso ayaa la sheegay in guddigaas ay u xil saareen qaban qaabada dhismaha waddada halbowlaha ah ee dhex marta magaalada Boosaaso.
Raggan ayaan wali la soo taagin maxkamad, balse Xeer Ilaaliyaha Guud ee Puntland, Maxamuud Xasan aw Cismaan ayaa BBC-da u sheegay in dadkaas la xir xiray si dhakhso ah maxkamad loo hor geyn doono, raggaas ayay sidoo kale sheegeen in lagu soo xiray amar maxkamadeed.
"Marka qof dambi lagu soo eedeeyo, hay'adaha amniga ayaa soo eedeeya, sharciguna waa ka sarreeyaa cid kasta. Maxkamad ayaan soo taagi doonnaa marka uu soo dhammaado gal dacwadeedku," ayuu yidhi xeer ilaaliyaha guud Puntland.
Xeer ilaaliye Maxamuud Xasan ayaa intaas ku daray in xarigga raggaas ay waddo sharci ah u mareen.
"Qof haddii la xirayo waddo sharci ah ayaa loo maraa, haddiise qofka waaran lagu soo xiro cid faragelin ku samayn karta ma jirto, walaa madaxweyne Deni, walaa madaxweyne Farmaajo".
Xeer ilaaliyaha oo BBC-da u warramay ayaa ka gaabsaday in uu faahfaahin ka bixiyo lacagta la sheegay in dawladda fedaraalka ah ay bixisay iyo hannaanka ay soo martay labadaba, wuxuuna sheegay ay wadaan baadhitaan arrintaas ku saabsan.
Wuxuu intaas ku daray in arrintani aanay ahayn "mid siyaasadeed", ayaguna ka garsoor ahaan aanay shaqo ku lahayn arrimaha siyaasadda, taas baddalkeedana ay ciddii la soo eedeeyo sharciga marinayaan.
Dhanka kale ururada bulshada rayidka ah ee Puntland ayaa ku baaqay in raggaas la xir xiray dhakhso maxkamad loo hor geeyo.
Faysal Maxamed Warsame oo ah guddomiyahada ururada bulshada rayidka ah ee Puntland ayaa maamulka ugu baaqay in ciddii dambi loo haysto ay tahay in maxkamad la soo taago.
"Dastuurku wuxuu qorayaa, sharciga iyo qawaaniintuna ay dhigayaan, in haddii qofka dambi loo haysto ay tahay in maxkamada la soo taago, haddii dambi lagu helana sharciga la marsiiyo haddii lagu waayana xorriyaddiisa la siiyo".
Faysal ayaa intaas ku daray in dadka xiran aan waqti dheer xabsiyada lagu hayn karin, balse loo baahan yahay in ay caddaalad helaan.